Izindaba - Joyina Izandla Ukulwa Nobhubhane
NgoMashi 4, 2020, indiza evela eBrazil yafika ngokuphepha eShanghai, ithwele izifihla-buso ezingama-20 000 ze-PFF2 ezinikelwe yiLianhe Chemical Technology Co, Ltd., Eya eTaizhou Red Cross. Leli yiqoqo lesihlanu lezinto zokwelashwa ezinikelwe yiLianhetech kusukela nge-COVID-19. Ukuqubuka kwabantu abangenanhliziyo bayathanda, iminikelo evulekile ikhombisa umthwalo. Ukuze kusekelwe ngokuphelele ukuvinjelwa nokulawulwa kwe-COVID-19 nokugcina amanani ezinkampani "wokuzibophezela", ngasekupheleni kukaJanuwari, uLianhetech waqala ukuhlanganisa ngokugcwele izinsizakusebenza zomhlaba, ngokusebenzisa amakhasimende angaphansi kwe-UK naphesheya kwezilwandle ukuthenga imaski nezingubo zokuzivikela ziyashoda eChina. Ozakwabo benkampani yasekhaya naphesheya kwezilwandle, amakhasimende ahlanganisa ukuthengwa kwempahla, ezokuhamba, ngejubane elisheshayo lezimaski eziyindlala, izingubo zokuzivikela ezibuyela eChina. NgoFebhuwari 8, izifihla buso eziyi-100 000 ezathengwa yiFine Organic Limited, inkampani engaphansi kweBrithani, yafika eChina. NgoFebhuwari 12, kwafika amasethi angu-1 930 amasudi avikelayo eChina, kwathi ngoFebhuwari 17, kwafika cishe amaski angaba ngu-2 000 namasethi angaphezu kuka-600 amasudi avikelayo eChina. Amakhasimende ale nkampani aphesheya kwezilwandle i-FMC isize inkampani ukuthenga amasudi okuvikela angama-500 namaski obuso angama-20 000 aseDenmark naseBrazil. Kuze kube manje, uLianhetech unikele ngamaski angaphezu kuka-120,000, amasethi angu-3,000 amasudi okuzivikela nezinye izinto ezibiza ngaphezu kwama-yuan angama-700,000 kwi-Taizhou Red Cross Society. Inkinga ngakolunye uhlangothi, sekela kuzo zonke izinkomba. Ungesabi ukusweleka kwezembatho zempi, ngoba nami okwakho ukugqoka iLianhetech Technology kuzoqhubeka nokulandela ukuthuthuka kwalo bhubhane futhi kube negalelo ekunqobeni ukulwa nalolu bhubhane.